कपिलवस्तुमा चक्रपाणि र दीपकुमारमध्ये को बलियो ? यी हुन् एजेन्डा « Janata Samachar
कपिलवस्तुमा चक्रपाणि र दीपकुमारमध्ये को बलियो ? यी हुन् एजेन्डा
प्रकाशित मिति :3December, 2017 5:42 pm
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा तत्कालीन माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर रहनुभएका चक्रपाणि खनाल र पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायबीच तीव्र प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ ।
उपाध्याय भारतका लागि नेपालका राजदूत पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्न जिल्ला आउनुभएको हो । खनाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।
फरक फरक पृष्ठभूमिका दुवै विसं २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार बलराम अधिकारीसँग पराजित भएका थिए । निर्वाचनका विषयमा जोड घटाउ भइरहँदा उनीहरुको उम्मेदवारीले नै यहाँको चुनावी माहोल तताएको छ ।
विकास नै प्रमुख एजेन्डा
विकास निर्माणकै मुद्दालाई प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएका उनीहरुले बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नै दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
उम्मेदवार उठाएका अधिकांश राजनीतिक दलले उठाएका विषयसँग मिल्दोजुल्दो माग यहाँका मतदाताको पनि छ । कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाका अल्ताफ अहमद खानले आफ्नो क्षेत्रमा बाटो, खानेपानी र शिक्षाको समस्या समाधान भए जीवनस्तर माथि उठ्ने बताउँछन् । ‘विद्यालय नभएका कारण अहिले पनि हाम्रा बच्चा मदरसा शिक्षाको भरमा छन्’, उनले भने
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ को प्रदेश (क) का एमालेका उम्मेदवार विष्णु पन्थीले कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रर्वद्धन गरेर समृद्ध कपिलवस्तु बनाउन सकिने तर्क गर्दै सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने काम प्रमुख एजेन्डा भएको बताए ।
कतिपय स्थानमा पुलपुलेसाको निर्माण आवश्यक भएको ठान्नुहुने उहाँ जनताको जीवनस्तर उकास्न उद्योग खोल्न प्रोत्साहन दिई रोजगारी सिर्जना गरिने बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का सङघीय समाजवादी फोरम नेपालका उम्मेदवार अब्दुल रसिद खाँ अहिले पनि अस्पताल नभएका कारण दुर्गम क्षेत्रमा महिलाले बच्चा जन्माउन नसकेर मृत्यु हुने अवस्था विद्यमान रहेको र कतिपय स्थथानमा दश जोड दुईका क्याम्पस पनि नभएको तितो यथार्थ सुनाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का कांग्रेसका उम्मेदवार दीप कुमार उपाध्यायले पूर्वाधार विकास, सिँचाइ र आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण यहाँको चुनावी मुद्दा भएको बताए ।
जिल्लाको दक्षिण भेगमा अहिले पनि चेतनाको कमी रहेकाले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण चुनौतीको विषय भएको उनी स्वीकार्छन् ।
राप्ती नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर सिँचाई गर्ने परियोजनामार्फत जिल्लाको धेरै हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
छवटा नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको कपिलवस्तुमा कूल तीन लाख ११ हजार ७६० मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये पुरुष १ लाख ६९ हजार ४६४ र महिला १ लाख ४२ हजार २९४ छन् भने तेस्रो लिङ्गी २ जना रहेका छन् ।
यहाँ २५ हजार २१२ नयाँ मतदाता थपिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कपिलवस्तुले जनाएको छ । यसअघि भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताको सङख्या २ लाख ३८ हजार ८५७ मात्रै थियो ।
यति छन् मतदान केन्द्र
तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लामा कूल मतदान केन्द्र ४१० र मतदानस्थल २३३ तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा एक लाख १६ हजार ९३७, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ मा एक लाख २ हजार ४२० र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ३ मा सबैभन्दा थोरै ९२ हजार ४०३ मतदाता रहेका छन् । तीन निर्वाचन क्षेत्रमा गरी कूल ९६ वडा छन् ।
उम्मेदवार १८६ जना
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राजपा लगायत १९ वटा दल र स्वतन्त्र गरेर प्रतिनिधिसभामा ५६ जना र प्रदेशसभामा १३० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कपिलवस्तुका निर्वाचन अधिकारी ज्ञानहरि घिमिरेले जिल्लामा निर्वाचनका लागि कूल ३ हजार २७९ कर्मचारी परिचालन भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विगतका निर्वाचन भन्दा यसपटक निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका घटना कम भएका छन् ।
नाका र जिल्लामा सुरक्षा कडा
कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले १५३ मतदानस्थल अति संवेदनशील, ६५ स्थल संवेदनशील र १५ मतदानस्थल सामान्य ठानेर वर्गीकरण गरेको जानकारी दिँदै भारतसँग जोडिएको नाकालाई सोमबार १२ बजेदेखि नै बन्द गरिने बताए ।
उले नाकाबाट हुनसक्ने आपराधिक गतिविधिलाई निगरानीमा राखिएको र भारतीय पक्षसँग सूचना आदानप्रदान पनि भइरहेको बताए । निर्वाचनका लागि यस जिल्लामा कूल पाँच हजार ३३७ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । यस जिल्लाको दक्षिणी भेगमा मधेसी समुदायको बाहुल्यता छ भने उत्तरी भेगमा पहाडी समुदायको बाहुल्यता छ ।
मितिः २०७५ कात्तिक १ गते विहीबार बिहान ५ः०० स्टेसन आइडी ५ः०२ राष्ट्रिय गान ५ः३० तीर्थ